Dọkịta na-awa ekwe mmadụ mbụ isi transplant na-eme ka pitch na-US dọkịta - News Ọchịchị
Dọkịta na-awa ekwe mmadụ mbụ isi transplant na-eme ka pitch na-US dọkịta
Isiokwu a na-akpọ “Dọkịta na-awa ekwe mmadụ mbụ isi transplant na-eme ka pitch na-US dọkịta” e dere site Sam Thielman na Annapolis, n'ihi na theguardian.com on Saturday 13 June 2015 12.38 UTC
N'ehihie Friday na Westin Hotel na Annapolis, Maryland, na ndị ọrụ afọ ofufo n'ihi na mmadụ mbụ isi transplant site n'akụkụ ya, Dr Sergio Canavero mere a ikele ka n'oru dọkịta na-awa njikere inyere ya aka ịrụ usoro si na-ege ntị nke ibe dọkịta ná nzukọ kwa afọ nke American Academy nke akwara ozi na Orthopaedic dọkịta na-awa.
Banyere otu ụzọ n'ụzọ anọ nke oche e nyere ka video ese foto, tripods na ọkụ ila. Iji nweta pịa-enyi na enyi dọkịta ka n'ihu ụlọ, otu n'ime ndị bịara nwere na-ikpo okwu okwu na bellow n'ime scrum gburugburu Canavero: "'Scuse m, pịa, Ga-amasị m n'ihi na ị na kwado anya, Biko. Enough bụ ezughị. "
Isiokwu nke Canavero si keynote bụ usoro ọ na-enwe olileanya ịrụ na-esonụ 24 ọnwa, nke ọ kpọrọ isi Anatomosis anwa anwa, ma ọ bụ "Heaven".
"Taa m ebe a na-enye anyị niile a ọhụụ,"Canavero kwuru.
The dibịa kwukwara na e nweghị ihe dị ka ihe onwe onye, na na ikpeazụ mgbaru ọsọ nke ya oru ngo bụ ndụ ndọtị.
N'ihi ihe abụọ na ọkara awa (ngosi e mere ndokwa maka 90 nkeji) n'ihu na-ege ntị nke ukwuu n'ime-acha anụnụ anụnụ- ma chaa isi awọ-ruru eru n'etiti-afọ dọkịta na-awa, Canavero paced obosara nke ogologo ụlọ na ude slacks na a ọbara ọbara-aja aja uwe, bespectacled, idet ibuot, na-achọ ka ihe karịsịa hip mọnk.
Sergio Canavero na-azọrọ na ọ ga-enwe ike imezu a isi transplant. Foto: Youtube
Ọ nọrọ ọtụtụ nke mbụ ọkara awa firing anya aphorism mgbe aphorism, ụfọdụ ndị dere gụnyere Kierkegaard na Arthur C Clarke, ndị ọzọ nke ya onwe ya na-echepụta.
"Ọ bụrụ na Eluigwe bụ aghara, agwa bụ crazier, na ọdịdị ga-nyere kwusi mgbe ọ na-abịa ihe ọ na-eme ka anyị niile dị ka ndị e kere eke na mbara ala a,"Ka o kwuru.
The neurosurgeon, nke Italy si Turin Advanced Neuromodulation Group, veered n'etiti agbalị na-akpali-ege ya ntị, na-egwu ala miri n'ime neurobiology na goading na-acha ọcha-haired ọgwụ ọkachamara kpọkọta n'ihu ya. N'otu mgbe ọ tụnyere usoro ọdịnihu ịga nke ọma na ọnwa ọdịda, na ihe oyiyi nke JFK na ihuenyo ya n'azụ.
"Anyị ga-aga na ọnwa iji nwalee ndị anyị bụ, nwalee nkà anyị, nwalee anyị obi ike, ịhụ ihe ụdị ndị anyị na-!"Ka o kwuru.
"Anyị ga-eme ya ka ọ na-anwale America! Anyị ga-eme ya ka ọ na-ahụ ma ọ bụrụ na ị ka na-America! Mgbe m toro, America bụ n'elu. "
Ekwe elu-akwụ ma na-akwado site na "American billionaires", Canavero gwara nzukọ: "M wee ị; M obi ụtọ nakwere a na-agba iji umeala bịa n'ihu gị ka ị a bụrụ na nke a bụ omume. "
O kwuru na ọ na-ezube ịrụ usoro ma na United States ma ọ China.
Ịdị umeala n'obi bụ àgwà na-ege ntị yiri ka chọpụta na Canavero.
"Ị nke mmadụ niile nwere anya echiche nke onwe, abụghị ihe efu,"Kwuru na mbụ dọkịta inwe a ajụjụ ke Ajụjụ&A nnọkọ. "Gịnị onwe bụ onye ọrịa? The ahụ ọhụrụ, ma ọ bụ onwe na ọ na-ata ahụhụ na?"
"Jụọ ya onwe gị,"Canavero zara.
Valery Spiridonov, na onye wepụtara onwe na-ata usoro, kwuru obere ná nnọkọ, ma ọ bụ na ọnụ ọgụgụ nke oké mmasị. Spiridonov nwere Werdnig-Hoffmann ọrịa, ma ọ bụ ọkpụkpụ azụ muscular atrophy. Ọ bụ a akpata ike ọgwụgwụ, emecha na-egbu egbu ọnọdụ na agbaala a na-ahụ anya ọnụ ọgụgụ na 30 afọ Russian si ahu. Spiridonov emailed Canavero nke-acha anụnụ anụnụ mgbe dọkịta oru ngo malitere inweta pịa anya.
Valery Spiridonov: 'Ana m ekwere ahụ m bụ nnọọ na-arụzi ụgbọala na m chọrọ wepụrụ' Foto: Corbis
Spiridonov zara ajụjụ.
"Ekweere m na ahụ m bụ nnọọ na-arụzi ụgbọala na m chọrọ wepụrụ,"Ka o kwuru. O kwuru nke nwere iku ndị mmadụ aka ya n'ọnọdụ ya na a obere oche nkwagharị na-esote ogbo.
Dọkịta ndị ọzọ, kwuru Canavero, nwere ajụjụ ma ma ọ bụ elu jụrụ ọnụego nke buu ngwa na N'ịdị mbugharị nwere ike pụtara na a na-ahụ transplant ndidi pụọ nke uche ya. Canavero gwara ha ka ha were onwe-ha Spiridonov ebe.
"Ị ga-kweere na ọnọdụ gị nwere ike ụgbọala ị na-ara, ka ara?"Ka ọ jụrụ Spiridonov.
"Ee,"Spiridonov zara. "Kwa ụbọchị."
Gịnị banyere ihu spinal akwara?
Ndị ọzọ ajụjụ, n'ezie, bụ ma ma ọ bụ na-arụ ọrụ bụ omume. Canavero kwuru gaba mbugharị na ụmụ oke ọma rụrụ ke China, kwuru na polyethylene glycol (Mkpọ) - Nke a na-eji dị ka a laxative, kama a chọpụtara nwere ngwa maka spinal mmerụ ọrịa - ike nnoo gluu na moto emmepe nke ọgidigi azụ azụ ọnụ ọma mgbe ha na a machiri.
Otu dọkịta etre Canavero n'etiti ya nkuzi igosi na, dị ka a vaskụla dọkịta na-awa, ọ nọ na-nchegbu banyere, n'etiti ndị ọzọ, ihu spinal akwara.
"Ị na-agbarapụ ịkpụ nri site na,"Ka o kwuru. Canavero kpọrọ ya ka o sonyere ya na-arụ ọrụ otu, sị na o mere ya na ugbu a na ọ bụ oge ha ka ha kwụpụ elu.
Ndị dọkịta ahụ na-ekewa na ma ma ọ bụ ịrụ usoro mgbe nile. Bụ a isi transplant ụkpụrụ?
"Amaghị m,"Kwuru Oscar Tuazon, a na-awa dabeere na nso Alexandria. "Na ụmụ mmadụ, isi ihe bụ isi! Ahụ bụ nnọọ a kpuchie ma ọ bụ a shei. N'ihi ya, ọ bụ isi na nke ahụ bụ ihe dị mkpa. Enwere Ike, ka na-ekwu, ma ọ bụrụ na onye dị ukwuu, dị ka Einstein, eleghị anya ị pụrụ chebe ya. "
Tuazon gara ogbako na Edith Tuazon, a nurse ya na nwunye ya nke 44 afọ. Ọ bụ unconvinced.
"M na-eche dị ka ọ na-aga n'ebe dị anya,"Ka o kwuru. "Were ya na ị nwere onyeisi transplant nke onye bụ onye na-ese na onye na-adịghị onye na-ese -ga na onye na-enwe ike ime ka ogwe aka ya na aka ka ise? Ga-n'aka ka 'na-eche?'Ọ ga-eche echiche dị ka ya mere tupu? Olee otú ndị niile na ọrụ na-aga ọrụ ọnụ?"
Canavero nwere azịza ya nye na otu na ngosi: "Ị bee spaghetto, ị na-eme mkpọ, na ọganihu. "
Ekwe ntị na a ụgbọelu? Ọ pụrụ ifu nnukwu $$
Morning Light Ịnọ ebe Nwere ike aka mee ka ị thinner
Apple buyers Rue elu price nke ọhụrụ 'ala na-eri ...
19205	0 Nkeji edemede, Medical research, News, Sam Thielman, Science, US ozi ọma, World ozi ọma
← New ọmụmụ na-ekwu na-ahụ mkpụrụ ndụ ihe nketa njikọ n'etiti creativity na iche echiche ọrịa The 11 PlayStation egwuregwu ị nnọọ ike na-atụ uche na-abịa afọ →